Datafari: yakavhurwa sosi yekutsvaga injini yemabhizinesi | Linux Vakapindwa muropa
Datafarian yakavhurika sosi bhizinesi yekutsvaga software uchishandisa Apache Solr yeiyo indexing uye yekutsvaga zvikamu. Inobatanidza Apache ManifoldCF, Apache Solr, uye Apache Cassandra. zvichibva paHTML5, CSS3 uye jQuery.
Iyi yakapetwa injini yekutsvaga mupfungwa yekuti inotsvaga kubatana kune dhata sosi, kunongedza, kutsvaga uye graphical system manejimendi uye inoparadzirwa uchishandisa SolrCloud.
Datafarian yakasikwa neFrance Labs. France Labs yakatsvaga yakavhurwa sosi yekutsvaga software kuti ivandudze yavo R & D ine itsva intranet inoenderana algorithm.
Chikwata chakaona kuti pakanga pasina chinhu chakachengetedzwa uye chiripo pasi peApache License uye chakagadzira Datafari.
Akave akazvimiririra pakutsvagisa pane algorithm, achifunga kuti yaive neicho kukosha kwekutsvaga kwayo.
1 Nezve Datafari
2 Ungawana sei Datafari?
Iyi yekutsvaga injini inogonesa vashandi kuti vawane data chero kwairi, kwakachengeteka uye kwakachengeteka.
Zvikurukuru, Datafari inowana uye inongedzera dhata uye zvinyorwa kubva kwakasiyana masosi uye mafomati emafaira, uye inobvumidza kutsvaga zvese zvemukati zvinyorwa uye metadata.
Kunze kwezvo, uyeInowanikwa mune yakavhurwa sosi vhezheni, inonzi Datafari Nharaunda Edhisheni, uye mune yevaridzi vhezheni, inonzi Datafari Enterprise Edition.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, ndiyo injini yekutsvaga yebhizinesi.
Zvinangwa zvako zvakasiyana newebhu yekutsvaga injini, uye matambudziko ehunyanzvi akasiyana.
Kune bhizinesi yekutsvaga injini, inofanirwa kuve yakawanda-sosi, yakawanda-fomati, uye maneja chengetedzo.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuzvibvumira wega kushandisa chishandiso. Mune yemahara vhezheni, isu tinogona, padivi rekutonga:
Zvekutsvaga kutsvaga kusanganisira veBoolean vanoshanda
Iyo Apache ManifoldCF yakavakirwa chinokambaira iyo inobvumidza indexing yeCMS, mawebhusaiti, akagovaniswa mafaera (Netapp, Samba, Windows), maemail, dhatabhesi, HDFS.
"Zvizere zvinyorwa" analytics uye plug-in sisitimu yekuwedzera shanduko mafirita mune einongedzera uye ekutsvaga matanho
Kushandiswa kweApache Tika kuongorora uye kubvisa zvirimo uye metadata kubva kumhando dzakasiyana dzemagwaro (MSOffice, OpenOffice, HTML, XML, PDF, RTF, TXT, ZIP, EXIF, MP3 ...)
E-mail yekuzivisa system yekugamuchira zviyeuchidzo zvemitsva mitsva mune yekuisa modhi (yekugamuchira ruzivo) pane yekudzora modhi.
Kune vekutsvaga injini maneja
Mushandisi wekutsvaga query graphical analysis chishandiso.
Solr manejimendi chishandiso chinoshandiswa muDatafari.
Chishandiso chekuongorora goho uye kuverenga kukosha kwemibvunzo.
Dhairekitori chishandiso chekuchengetedza pamwe neAD kana LDAP.
Chishandiso chekugadzirisa zvakafanana.
Chishandiso chekubata promolinks, ichibvumira data risiri mune indekisi kuti iratidzwe kune akaratidzwa mazwi akakosha.
Chishandiso chekutevera ekuteedzera zvinongedzo, ine akati wandei ekutengesa data masosi (Sharepoint, akagovaniswa mafaera, maemail, mawebhusaiti, CMIS ...
Ungawana sei Datafari?
Kune avo vanofarira kuwana iyi yekutsvaga injini, kuziva zvishoma nezvayo uye kuziva kana vachigona kuishandisa mumabhizinesi avo kana makambani, vanofanirwa kutevedzera anotevera matanho.
Datafarian tinogona kuiwana yakafanogadzirwa kuburikidza nemuchina chaiwo kana mudziyo unogadzika kana iwe unogona kurodha pasi kuisirwa kwaDebian kana Redhat (RHEL inowanikwa chete neDatafari Enterprise Edition).
Para avo vari vashandisi veDebian, Ubuntu kana akatorwa masystem ivo vanogona kushandisa iyo dhi phuku yakapihwa nevavaki kubva iyo webhusaiti yepamutemo webhusaiti.
Ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye voita unotevera kuraira:
Mushure mekurodha pasi, isu tinoenderera mberi nekuisa iyo package ne:
Para mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux anogona kuwana kuisirwa pane avo masisitimu nerubatsiro rwema docker midziyo saka pakuisirwa kwayo ivo vanofanirwa kuve nerutsigiro rwayo nekumisikidza nemirairo inotevera:
Kuti utange ipapo ipapo, zvimwe zvakanakisa tevera inokurumidza kutanga gwara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Datafari: yakavhurwa sosi yekutsvaga injini yemabhizinesi